Ubulolo obuhamba nesibini | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 13/10/2021 22:19 | Ubudlelwane
Ngokuqinisekileyo uvile ngaphezu kwesihlandlo esinye malunga nebinzana: "Kungcono ukuba wedwa kunokuba unabantu ababi". Ngelishwa, baninzi abantu abakhetha ukuba kubudlelwane obunetyhefu, ukunqanda ukuba bodwa ebomini. Ubulolo obaziwayo obuhamba kunye buqheleke ngakumbi kunokuba abantu abaninzi banokucinga ekuqaleni.
Akukho nto yenzekayo ngokungabinalo iqabane kuba kungcono ukuba wedwa kunokuba ube kubudlelwane obungenampilo, ukuba ayinakamva kwaye iya kugwetywa.
1 Ukungatshati yinto efanelekileyo ebomini
2 Ubunzulu obukhulu bokuba lilolo buhamba kunye
3 Ukonakala ngokweemvakalelo kwesizungu
Ukungatshati yinto efanelekileyo ebomini
Njengokuba kusenzeka xa uneqabane, ukungatshati lukhetho olusebenzayo lobomi. Akucetyiswa ukuba nobudlelwane nomnye umntu apho uthando lubonakala ngokungabikho kwaye ityhefu ikukukhanya kwemini. Uninzi lwezibini zanamhlanje ziyasilela kuba akukho luthando lokwenene ngamaqela kwaye ubudlelwane benziwa ngenxa yokuxhomekeka ngokweemvakalelo kunye nomnqweno wokungabi wedwa ebomini.
Ubunzulu obukhulu bokuba lilolo buhamba kunye
Ubulolo obuhamba kunye nobangela ukungabikho komntu ophethwe yile nto. Unokusondeza isibini ngokwembono yomzimba kodwa kwinqanaba leemvakalelo ukungabinanto kubaluleke kakhulu. Kukho uthotho lwezinto okanye iinyani ezinokubonisa ukuba umntu unesizungu ehamba nesibini:
Esi sibini asimameli, ebuhlungu kakhulu kwinqanaba leemvakalelo.
Kukho ukungathandeki ngokupheleleyo iinjongo ezinokwenzeka okanye amaphupha ukuba kwenziwe ngokubambisana ngesi sibini.
Iqela elonzakeleyo lihlala linetyala layo yonke into kwaye akukho nxibelelwano xa kuziwa ekusombululeni iingxaki ezahlukeneyo ezivela ngaphakathi kwesi sibini.
Le miqondiso ibonisa ukuba esi sibini ayisiyonto inqwenelekayo kwaye ukuba nesizungu sele sikhankanyiwe kuhleli ngaphakathi kubo. Akufanelekanga ukubandezeleka ngenxa yokuba neqabane lakho kwaye kungcono ngakumbi ukuba wedwa. Ukuba nobudlelwane kufuneka ibe ngumcimbi wababini kwaye kufuneka ibe kukuzibandakanya okupheleleyo kubo bobabini abantu.
Ukonakala ngokweemvakalelo kwesizungu
Ubudlelwane obunetyhefu abulunganga kuye nabani na kwaye inokubangela umonakalo omkhulu weemvakalelo kumntu ophethwe yiyo. Ukuba neqabane kunye nokuziva ulilolo yinto engafanelekanga ukuba ivunyelwe kuba amanxeba akule meko abaluleke kakhulu. Ngenxa yoku, kungcono ukubuphelisa obu budlelwane ngokukhawuleza kwaye uzame ukwakha ubomi kwakhona, nokuba uwedwa okanye nomnye umntu owenza esi sibini siphilile.
Ngamafutshane, akuyomfuneko ukuba neqabane okanye ube nomntu kwinyani elula yokubaleka isizungu. Kukho amaxesha apho ngaphandle kobudlelwane obuthile, umntu uhlala yedwa. Le yinto eyaziwa ngokuba lilolo kwaye kolu lwalamano akukho nto yothando okanye uthando, into eyimfuneko ukuze isibini sisebenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Ubulolo obuhamba nesibini